Isazi Semalt Sichaza Indlela Yokukhulula I-Mac Yakho Kusuka Kumagciwane
Uma umuntu enenkinga nge-Mac yakhe, noma ukhathazeke ngokuthi kungenzeka ukuthi ine-malware,lokhu okuthunyelwe kusiza abantu ukuthi bayisuse mahhala noma ngeshibhile. Okubaluleke nakakhulu, kunezinyathelo zokuqinisekisa ukuthi akukwenzeka futhi.Akungabazeki ukuthi umuntu une-Mac enegciwane. Nokho, amathuba okuwadlulisela ku-PC aphezulu kakhulu. Awukwazi ukushoukuthi ayikho izinhlelo ze-malware ezenzelwe ama-Macs. Kuphela ukuthi abasebenzisi ababhekiswe kakhulu yibo abasebenzisa i-PC ngenxa yobuningi babo.
Ukuthandwa kwe-Mac eminyakeni yamuva kuye kwashintsha ukugxila kwabantu abanobubikanye nezinhloso ezingemuva ngemuva kwazo zonke izinsuku. Kulesi sihloko, uJulia Vashneva, isazi esiholela phambili i-Semalt ,igxile kuma-malware namagciwane asebenza kuma-Macs.
I-Malware ihluke kwi-software enonya njengegciwane. Isizathu siukuthi ayifuni kukhompyutha ngaphandle kolwazi lomsebenzisi. Ezimweni eziningi, kuguqulwa njengesofthiwe evumelekile kanjalo ekhohlisaumsebenzisi. Kungaba ngesimo sesikhangiso, noma i-imeyili, okungenza umsebenzisi afake uhlelo oluthile. Kusukela ngaleso sikhathi kuya phambili, iqoqaulwazi oluyimfihlo kusuka kukhompyutha.
Inkinga nge-Mac malware yukuthi ithatha ifomu lezinto ezikuthiumuntu ufisa ukusebenzisa ngokumelene nenkinga efana nesofthiwe yokulwa ne-malware. Abaqaphi bangena kumawebhusayithi asemthethweni futhi baqondisa kabusha isivakashiindawo ehlukile lapho benza sengathi bayaskena futhi bathola i-malware kwi-Mac. Ngaphezu kwalokhu, yenza isiphakamiso sesofthiwe, okuyi-ai-malware ngokwayo. Uma uzenza ukuskena nokulungisa izinkinga, kungase kucele ukukhokhisa imali.
Ukususa isofthiwe ye-Mac, noma i-malware ayidingi ukuthi umnikazi asebenzise noma ninii-dime. Ngakho-ke, abasebenzisi bayelulekwa ukuba bangenise ulwazi lwabo lwekhadi lesikweletu kunoma yiluphi uhlelo noma iwebhusayithi ethi banesixazululokwinkinga yekhompyutha.
Ngenkathi wenza kanjalo, uma ucingo oluvela kumuntu othi luthole lubiIsofthiwe kwikhompyutha ifika, kuyinhlobonhlobo esihlokweni futhi kungaba ngcono ukuvala ucingo ngesikhathi esisodwa..
Nakhu okumele ukwenze lapho iwebhusayithi ethize iphakamisa isaziso sokuthi ithole isofthiwe enonya:
2. Hamba kufolda ye-Downloads futhi uhudule wonke amafayili wokufaka angafuneki ku-Bin.
3. Vula udoti.
Uma umuntu esevele efake isofthiwe engalungile ngephutha, lezi zinyathelo ezilandelayo kufanele zisize:
1. Cindezela "I-Command + Shift + U", ukuze uvule ifolda Yosizo.
2. Vula Umsebenzi Wokuqapha bese ukhetha zonke izinqubo ezigijima.
3. Thola igama lokusebenza ohlwini futhi uchofoze "Yeka Inqubo".
4. Kufolda yezinhlelo zokusebenza, thola imininingwane yohlelo lokusebenza bese uyihudulela kudoti bese uyilahla.
Ukuvikela i-Mac kusuka kumalware
Kuze kube manje, i-Mac ayikhululekile kuyo yonke i-malware, futhi kunengqondo ukuthi umuntu angafunaukuvimbela lokhu ukuthi kwenzeke futhi. Amathiphu angezansi azogcina i-Mac iphephile kusuka kwi-malware ezayo.
Gcina i-Mac ivuselelwe ngaso sonke isikhathi.
Shintsha izibuyekezo ezizenzakalelayo.
Sebenzisa kuphela izinhlelo zokusebenza kusuka kubathuthukisi abathembekile.
Faka isofthiwe ye-antivirus Mac.